broadband - Synonyms of broadband | Antonyms of broadband | Definition of broadband | Example of broadband | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for broadband
Top 30 analogous words or synonyms for broadband
ဝိုင်မက် WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) ဆိုသည်မှာ ကြိုးမဲ့ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်တဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယခင်က အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ရာတွင် Dail-Up ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ADSL ဖြင့်လည်းကောင်း Broadband ကို အသုံးပြု၍ လည်းကောင်း ချိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ WiMAX သည် ၎င်းတို့နှင့် ခပ်ဆင်ဆင်ရှိသော်လည်း ကွဲပြားချားနားသည်။ ၎င်းစနစ်တွင် ဝါယာကြိုးမလိုအပ်ဘဲ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ Broadband နည်းပညာနှင့် ဆင်တူပါသည်။
လှိုင်းကျယ် သို့သော် ထို Broadband အခေါ်အဝေါ်သည် ၁၉၉၀ ခုနှစ်ပိုင်းများတွင် အင်တာနက် ချိတ်ဆက်မှု အမည်တစ်ခုဖြင့် ရောင်းချအသုံးပြုခြင်းများကြောင့် လူသိများလာသည်။
အိုအက်ဖ်ဒီအမ် အိုအက်ဖ်ဒီအမ် (OFDM) ဆိုသည်မှာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာတွင် အသုံးပြုသော မော်ဒျူလေးရှင်း နည်းစနစ် တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဘရော့ဒ်ဘန်း (Broadband) အင်တာနက် ဆက်သွယ်ရေးတွင် အိုအက်ဖ်ဒီအမ် မော်ဒျူလေးရှင်း နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုလေ့ ရှိကြသည်။
ရွှေမန်း၊ ဦး ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကုန်နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အစပိုင်းတွင် သားဖြစ်သူ တိုးနိုင်မန်းပိုင်သည့် Red Link ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာတယ်လီပို့မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် Broadband အင်တာနက် ကိုလက်လီ ပြန်လည်ရောင်းချသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ဝိုင်မက်စ် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု အမည်ဖြင့် လူသိများခဲ့သည်။
ကေအမ်ဒီ Designed for learners to discover and surf the timely updated news for any specific fields on internet. Learning Aids: Pentium Computers with high speed broadband Internet Connection.
လှိုင်းကျယ် လှိုင်းကျယ်(Broadband)ဆိုသည်မှာ ဆက်သွယ်ရေးလှိုင်းများ လွှင့်ရာ သို့ ပို၍ ကြီးမားသည့် လှိုင်းဗြက် ကို အသုံးပြုသည့် စက်၊ ဆိုလိုရင်းမှာ ပုံမှန်အသုံးပြုနေသည့် လှိုင်း သို့ စက်ပစ္စည်းများတွင် ပို၍ကျယ်ဝန်းအောင် လုပ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်(လှိုင်းကျယ်လျင် အသွားအလာလုပ်နိုင်သည့် အချက်အလက် ပမာဏ ပိုများလေဖြစ်)။
လှိုင်းကျယ် ရုပ်မြင်သံကြားစက်တွင် လှိုင်းကျယ်ဟု ဆိုလိုခြင်းသည် လိုင်းပေါင်းများစွာ ဖမ်းယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ Lo-VHF အင်တာနာ အသုံးပြုသည့် ကြိမ်းနှုန်းတစ်ခု သို့ လှိုင်းကျဉ်းသည် ၁လိုင်း မှ ၅ လိုင်းအထိသာ လက်ခံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံစံနှုန်း FS-1037C တွင် "broadband" သည်wideband၏ ကြောင်းတူသံကွဲဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်.
ဝိုင်မက် ထို့ကြောင့် WiMAX ကို Broadband Wireless Access (BWA) ဟုလည်း ခေါ်တွင်ကြသည်။ သို့သော် WiMAX သည် WiFi နှင့်မတူပါ။ WiFi စနစ်များထက် Network ဧရိယာ ကျယ်ပြန့်ပါသည်။ ဝိုင်မက် ကွန်နက်ရှင်းတစ်ခု၏ ဧရိယာ ကျယ်ပြန့်မှု့သသည် မိုင်နှင့်ချီ၍ ကျယ်ပြန့်ပါသည်။ အကယ်၍ ဝိုင်မက် ကွန်နက်ရှင်း ထုတ်လွင့်သော စက်ရုံတစ်ရုံအား တည်ဆောက်ထားမည် ဆိုပါက ၎င်း၏ သတ်မှတ်ဧရိယာ အတွင်း မည့်သည့်နေရာမှ မဆို အင်တာနက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
မာယင်းကျို ထိုင်ပေမြို့နယ်အစိုးရသည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုကာ အရပ်ဘက်မှ တည်ဆောက်လည်ပတ်သည့် စနစ်ဖြင့် ကြိုးမဲ့အင်တာနက် (Wireless Broadband Internet) မြို့တော်ကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ တည်ဆောက်မှုကြောင့် ထိုင်ပေမြို့သည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ပြိုင်ဘက် အမေရိကန် ကလိဖ်လန်မြို့၊ ဗြိတိန် မန်ချက်စတာမြို့၊ တရုတ် ထျန်းကျင်းမြို့တို့ကို (天津) ကျော်လွှားကာ အမေရိကန် (Intelligent Community Forum, ICF) ၏ အင်တဲလ်ဂျင့်မြို့တော်ဆုကို ရရှိခဲ့သည်။
အီးကောမတ်စ်နှင့် ဂျီအမ်အက်စ် WLL (wireless local loop) နည်းပညာကို ကမ္ဗောဒီးယား နှင့် လာအိုနိုင်ငံများတွင် လိုင်းတယ်လီဖုန်းများရှားပါးမှု၊ သုံးစွဲနိုင်ရန် ခက်ခဲမှုတို့ကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သော်လည်း မြို့တော် ဟုသတ်မှတ်သည့် ဒေသဝန်းကျင်များတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်သေးသည်။ Broadband ကိုသုံးစွဲနိုင်ပြီဆိုသော်လည်း လာအိုနိုင်ငံတွင် အကန့်အသတ်နှင့်သာ ဖြစ်နေသေးသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှလွဲပြီး ADSL နှင့် cable modem ဝန်ဆောင်မှုကို ယခုတိုင် တွင်ကျယ်ကောင်း မွန်စွာ မခံစားနိုင်ကြသေးပေ။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အငှားလိုင်းများအသုံး ပြုမှုတွင်ကျယ်နေပြီဖြစ်သော်လည်း ဗီယက်နမ်တွင် အနည်းငယ်သာ ရရှိနိုင်သေးသည်။